सर्टको टाँक: पुरुषको दाहिने, महिलाको देब्रे किन ? | Nepali Virals
अप्रिल 3, 2016 | समाज |0comments
के तपाइले ख्याल गर्नु भएको छ ? पुरुषले लगाउने सर्टको टाँक र महिले लगाउने सर्टको टाँक दायाँ र बाँया हुन्छ । जहिले पनि पुरुषले लगाउने सर्टको टाँक दाहिने र महिलाले लगाउने सर्टको टाँक देब्रपटि लगाइएको हुन्छ । तर के तपाइलाई थाहा छ यस्तो किन हुन्छ ? यसको पछाडी कुनै दैनिक क्रियाकलापसंग जोडिएको कारण हो वा शारीरिक वनावट मुख्य कारण हो ? यसका ’boutमा बिभिन्न धारणाहरु पाइन्छ ।
१) पुरुषलाई टाँक खोल्न देब्रे हातको मद्धत चाहिन्थ्यो त्यसैले दाहिनेतिर टाँक हाल्ने गरिन्थ्यो । तर महिलाको हकमा भने यो उल्टो हुन्छ । त्यसैले महिलाको देब्रेपटि टाँक लगाइन्छ ।
२) इतिहाससंग जोडिएको केहि तथ्य अनुसार नेपोलियन बोनापार्टले महिलाको कपडामा देब्रे टाँक लगाउन आदेश दिएका थिए ।
३) पहिला महिला र पुरुषको कपडामा धेरै अन्तर थियो । तर अहिले दुवैको कपडामा धेरै समानता आएको छ । कपडाको डिजाइनमा केहि अन्तर बनाउन पनि टाँक देब्रे राखिएको हो ।
४) भनिन्छ पहिला पुरुषहरु आफ्नो कपडा आफैँ लगाउँथे तर महिलाहरुको कपडा अरुले लगाइदिन्थे । पहिला मानिसहरु अधिकांश दाहिने हातले काम गर्थे । दाहिने हातले काम गर्दा महिलाहरुले कपडा लागाउने समय अगाडी बसेर टाँक लगाउन अप्ठेरो नहोस भनेर महिलाको कपडाको टाँक देब्रे लगाइन्थ्यो ।